Hagbadleyda Puntland oo ku qoslaysa golkii nabad iyo nolol ay ka dhaliyeen - Caasimada Online
Home Maqaalo Hagbadleyda Puntland oo ku qoslaysa golkii nabad iyo nolol ay ka dhaliyeen
Hagbadleyda Puntland oo ku qoslaysa golkii nabad iyo nolol ay ka dhaliyeen
Dalka Soomaaliya waxaa ka dhacay isbadal xoogle oo dhanka siyaasada, nabad galyada, dhaqaalaha iyo dawladnimada ah kadib curashadii hogaanka dalka loogu doortay Mudane Madaxweyne Muxamed Cabdullahi 8/2/2017. Dawlada fadaraalka ee Soomaaliya ayaa leh hadaf cad oo guud ahaan dalka ku soo dabaalaya nidaamkii iyo kala danbayntii dawladnimo ee burburtay 1991-kii.
Mudo ka yar laba sanadood markaad eegta waxqabadka halkay dawladu dalka ka qaaday iyo halkay maanta gaarsiisay, waa mid qofkii damiir leh oo iimaan leh oo wadaniyad lihi ku farxo kuna faano kuna qanco. Mudadu yaraa oo wax qabadku badanaa! Mahad alle weeye. durba ciidamadii qarankaa inoo dhismay oo bilaw fiican ah, durba hawadeenii ayaan lasoo wareegnay rag haysatay, durba caasimadeenii ayaa aduunkii kusoo dhiiraday oo nabad laga dhigay, durba diyaaradihii aduunka oo nabada ka faa iidaysanaya iyo dawladnimada Soomaaliyeed ee taaba gashay, ayaa garoonkeenii Adan Cadde saf uugu jira.
Durba dawladihii dariska ayaa inoola dhaqmaya siday inoola dhaqmi jireen markayno xiniinyaha lahayn shalay ee aynu ahayn dawlad jirta, durba wadamadii aduunka haday ahaan lahaayeen reer galbeed, dunidii carbeed, tii muslimka, Aasiya iyo Afrika oo dhan ayaa inagu soo qamaamaya iyagoo raba xiriir iyo wax wada qabsi dhulkena hodanka ah in ay la yeeshaan.
Durba Afrika iyo aduunkaba waxaa ka socda codkeena iyo soo jeedinteena, oo aad arkaysaan in taladii madaxweynaheena Farmaajo lagu nabadeeyay, Ethiopia, Erataria, Jabuuti, Suudaan, Masar, Uganda, iyo Kenya iyo Soomaaliya. Waxaan ka qaadanay kuna biirinay heshiiskaa qaarada oo talo la qaatay oo hirgashay.
Shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba waa jecel yahay dawladan fadaraalka ah ee samata bixinaysa dalkeena hooyo. Waxay dawladu la kulantay dhibaatooyin aan la xisaabin karin, oo dalkeena dhex yaala; nina kama sugayo in ay maalin ku xaliso dhib soo jiray ku dhawaad nusqarni. Hadaan soo qaadano bal hada hal dhib oo ka mid ah kuwa ay wajahayso dawladeenu ayaa wuuxu yahay.
CAQABADAHA MAAMUL GOBOLEEDYADA: Maamul goboleedyada ama dawlad goboleedyada fadaraalka Soomaaliyeed, waxaan wada ogsoonahay in ay ka dhasheen xiligii dalka Ethiopia ay ka talinayeen TEGREEGII cadawga Soomaaliyeed ahaa. Waxay inoo soo gudbiyeen waxay ugu yeereen fadaraal, oo dalkeena laga aqoon, fadaraalku waa nidaam jira dunida oo dawlado ku dhisan yihiin, laakiin lama gato badeecadkastoo suuq taal ee wixii adiga kaa anfacayaa laga taa oo baahidaada ah iyo dantaada.
FADARAAL macnaheeda waxa uu yahay, dad aan waxbadan wadaagin oo aan is qaadan karayn, wax u dhaxeeya oo lagu haynkaro ayaa layiraahdaa FADARAAL. Hadaba Ethiopia tusaale ahaan waa kala diin, kala af, kala dhaqan, dawladna way rabaan wadaag ah oo ka dhaxaysa, hadaba waxaa xal u ah nidaamka fadaraalka waana qaateen. Markay timaado inaga soomaalida ah waxaynu nahay dad isku isir ah, isku diin ah, isku af ah, isku midab ah, wax kala duwaansho ahi majiro soomaali waa uun soomaali mahadaa illaahay baa iska leh. Hadaba sidaa ayaynaa waahoreba u qaadan fadaraal maadama dalkeena uusan uqabin baahi.
Hadaba dadbaa ku andacooda oo qiil uuga doondoona fadaraalka, dadkeenaa laysugu keenayaa oo dawladnimo ayaan ku dhisanaynaa iyo wax lamid ah, kolkaa hada waa iskuwada raacsanahay in aan wadano nidaamka fadaraalka ah. Hayeeshee maha mid inaga inaga yimid oo aynu xal u aragnay, ee waa mid TIGREE inoo keenay kuna dhisay maamul goboleedyada dalkeena. hadafkiisuna Tigreega waxa uu ahaa qaab cusub oo u keeni kara soomaali mudo dheer in ay is fahmi waydo, kuna jirto fadaraal qablilaysan oo aan ahayn fadaraalka dunidu taqaan.
Hadba waxaan leenahay haraadigii Tigreegu, waxay hore u ahaa yeen caqab hortaagan in dawlad dhexe oo xoogleh oo fadaraal ahi ka dhalato dalkeena, waadna aragteen in dawlad walba oo tan ka horaysay ay dhaqaaqi wayday oo lugaha ay ku dhageen. Maxaa yeelay nin walba madaxweyne ayaa loogu yeeraa, bilwalbana malaayiin doolar ayuu helaa, markaa ma doonaayo dawlad xoog leh oo dalka ka dhalata, qabiilkiisii uu ka dhashayna wuu isku hareereeyay xarantayna la cunaan.
Markii dawladani dhalatay, markiibii dagaal bay ku qaadeen, dhan walba ah. Dagaalka dawlada lagu qaaday in aysan hirgalin, waxaa ugu daran Puntland oo waxayba gaareen heer, dawlad goboleedyadii dalka ay isu keenaan oo shaqadii dawlada dhexe ee fadaraalka ah qabtaan iyagu sidii iyagoo dalka xukuma oo soomaali dooratay.
Hadafkoodu waxa uu ahaa in laga tuuro kursiga hada faramaajo, hadii lagu guul daraystana doorashada soosocota ay iyagu hogaanka sare ku guulaystaan. waxayna ka dhameeyeen dawlad goboleedyadii oo dhan mashruucaas. Soomaalidaa ku maah maahda “Sirmaqabe saabaa biyo u cesha” Dawladeenii waxay ku baraarugtay dhagarta intay qodontahay, kolkaas ayay go aan satay in dawlad goboleedyada boodhaka laga jafo, waajibna ay tahay in laysla jaan qaado oo loowada adeego danta dalka iyo dadka ayadoo laraacayo rabitaanka shacabka oo ku salaysan maslaxda dalkeena.
Dawladnimadu macaanaa! halmar unbaa la arkay shantii shaydaan ee tigreega hoos fadhiday, oo gudoomiyaha samaystay, oo kolba ku shiraayay gobolada dalka, oo noqday, oo libaax ku dhax dhacay!! hadee miyaan ka sheekayn karaaba fiigoodii ilaa kenya waa sii marayay waa maqlaynay. caqli xumo waa nimanka fahmi waayay hade awlaba tigtee ayaa meesha idinku hayay isgiina daadkaa qaaday. waxaa layiri “Dawaco meeshay malabsi uuga baratay, ayay macaluul uugu bakhtidaa”
Dawlad layskuma taag taago, hadaba dawladeenu si weyn ayay uuga guulaysatay dawlad diidkii isbahaysi ee soomaali hortaagnaa waana lakala adkaaday. dawladii iyo shacabkii Soomaaliyeed ayaa guulaystay. Waxaan idin waydiinaa soomaaliyeey, away ningii Gaas ahaa ee madaxda u ahaa maamul guboleedyada dalkeena? Mar labooqday isagoo kusugan waxaan dhaamin sariir hoosteed! ayaa niman akhyaara oo reer Puntland ubadan ay booqdeen gurigiisa.
Waxay warsadeen Mudane madaxweyne Dr. Gaas, waydan olole xoog leh ayaad waday, goboladii dalkana waad isku dubariday, shirar badan baad qabatay, laakiin ayaamahan laguma hayo, edeb ayaad yeelatoo saaxafada xataa ma ka hadashid, marka aqoontaadii miyaad boodhka ka jaftoo ku bartay edebtaan kaa muuqata iyo gaabsashadaan?
Wuxuu yiri Dr. Gaas jawaaab nin wali qosol aflabadii yeeray “Adeerayaal dhirbaaxadii shariifsakiin ku dhacday ayaa ishaa iiyeeshay aamuskana ibartay”
Waji cusub iyo dhagar loo dagay dawlada fadaraalka, marlabaad, ayadoo laga duulaayo doorashada 2020 dalkeena hadii illaahay idmo. Markay arkeen in markaan laga adkaaday, waxay badasheen shaadhkii, khamiis cad ayaa loo soo xirtay Madaxweyene farmaajo iyo Madaxtooyada Soomaaliya. Waxay xasuusan yihiin isbadalka socda iyo wixii shariifka ku dhacay.
Waxaa lagu guulaystay in madaxtooyada Soomaaliya, laga dhaadhiciyo, in ay Puntland majaraha u qabtaan Dr. Gaas kadib 2019, dad taageersan dawlada fadaraalka ah, oo kabadalan tii Dr. Gaas. waxaana lagu beer laxawsaday in loo hayo nin baari ah oo lashaqaynaya dawlada fadaraalka ah amarkeedana u hogaan samaya. waxaana lagu salaaxay in xisbi nabad iyo nolo taageersan oo codsiinaya 2020 laga hirgalinaayo Puntland. Dawladu waa u guuxday saxankaa loo saaray madaxa kore ayayna ka cayaareen!
Waxaa loo soodiray Mogdisho nin daganaa, oo taksiile ka ahaa maraykanka, marna meelaha caruurta lagu hayo ku lacag qaadan jiray, laakiin hada sheegta in uu yahay milyaneer!! aduunkoo dhan laga yaqaan, ayaamahana qaybinaayay, laaluush lagu doorto Puntland gudaheeda iyadoo shacabku is waydiinaayo halkee katimid lacagtaani? Ninkan oo lagu magacaabo Maxamuud Khaliif Jabiye. Jabiye oo ah mid ay Raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya, mudane Cumar Sharmarke amray saaxiib kii Dr. Gaas fulinta mashruucaan laga soo qaaday Mogadishu, kharashkana Gaas waa diiday waxaa jira tuhun dhanka Sharmarke ah.
Dawladu waxay soo siisay Maxamuud Khaliif gaariga aan xabadu karin, diyaarad ayay Mogadishu uuga soo qaaday kuna keenta garoonka magalada garoowe, jabiye iyo baabuurkaas, Dr. Gaasna waa soo dhaweeyay guushaas. Cumar oo malaayiin doolar ka helaya dawlada Emaradka saaxiibo uu ku leeyahay ayaa salaxday Puntland iyo jubaland codkooda 2020. markii ninkan la diray jabiye uu Mogdisho kula kulmay madaxda qaranka u saraysa, ee arinkii hirgalay ayaa waxaa xaflad gaara dhigtay Hagbadleyda Puntland, waxaana Mogadishu laga dhaadhiciyay in markaan ay tahay markoodii ninkanina yahay mid daacad u ah dawlada fadaraalka ah.
Waxaay heleen waxay rabeen oo dadban, waxayna doonayaan in ay lumiyaan kalsoonida shacabka Puntland ku qabaan dawlada fadaraalka ah ee Mogadishu fadhigeedu yahay, waxayna ogyihiin sida shacabka Puntland u rabaan madaxweyne farmaajo iyo raysal wasaare khayre oo ay uugu soo dhaweeyeen Puntland, taasoo ay kaxumaayeen hadana ku dadaalayaan kala shaki galin iyo fidno dhexmarta.
Waxay shacabka Puntland ku faraxsan yihiin isbadalka dalkeena ka dhacay, waxayna doonayaan isbadal ka dhaca Puntland iyo in laga baxo hagbada 20 jirsatay ee dikteeytar ee Garoowe. Dadku waa garanayaan in baabuurka lasiiyay Jabiye oo ah isla noocii ay Baydhabo ka dijisay uu yahay mid lasiiyay Dr. Gaas mid lasiiyay cumar oo ka dhigan ninkii doontuu saaraa bad wayn dhexdeed dalooliyay!. markaa waxaan leenahay waa gool haduu u hirgalo quruxbadan oo laga dhaliyay Mogdisho 2020 doorashada.
Waxaanse lasaadalin karin siyaasada Mogadishu oo ah mid qodo dheer. Dadka Puntland maha dad loo soo hulaabto oo lamaro, waxaana ka go an isbadal dhab ah sanadka 2020 (no more hagbadleey) hor istaagta dawlad Soomaaliyeed oo dalka o dhan hanata.
Waxaan higaadin doonaa hab usocodka isbadalka dalkeena, anigoo idiin soo bandhigi doono arrimaha siyaasada ee qarsoon.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qoraaga ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan Caasimada Online. Caasimada Online, waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa saliimka ah. Kusoo dir qoraaladaada [email protected] Mahadsanid